I-US inxusa ukhetho olunokuthula eBurundi | News24
I-US inxusa ukhetho olunokuthula eBurundi
Washington – Izwe i-United Sates linxuse amazwe asempumalanga ye-Afrika ukuba ahambise abantu abasezingeni eliphezulu eBurundi ukuze baqinisekise ukuthi kuba nokhethi okhululekile futhi olunokuthula kuleli lizwe.
Okhulumela uhulumeni wase-US uthe abahambisani nesinqumo sikaMengameli waseBurundi uPierre Nkurunziza sokumela elinye ihlandla lokuba umengameli waleli lizwe.
Ukuphoqa ukuthi amele elinye ihlandla uNkurunziza kuphikisana nesivumelwane i-Arusha esasayinwa ngo-2005.
OLUNYE UDABA:Owaliwe uhambe wayozikhulula egcekeni lasekhweni
Isinqumo sikaNkurunziza siqubule udlame kuleli lizwe elincane lase-Afrika kwavusa itwetwe ngemuva kokuba libe nokuthula kusukela ngo-2005.
Izimbangi zakhe zikhala ngokuthi ngokufuna ukuma elinye ihlandla wephula umthethosisekelo omvimbela ukuthi angenele esokuvotelwa kwesobumengameli.
Izinkulungwane zabantu baseBurundi sezilifulathele leli lizwe ngenxa yodlame oluqhubekayo ezindaweni ezahlukene.
UKirby uthe beyi-US bayesekile ingqungquthela yabaholi base-Afrika ebiseTanzania ngeSonto lapho bekudingidwa eyokuthi kuhlehliswe ukhetho ngenyanga nengxenye.